Jeneral Indha-Cadde oo ka hadlay halis DF Soomaaliya aysan ku baraarugsaneyn oo sababi karta.. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Jeneral Indha-Cadde oo ka hadlay halis DF Soomaaliya aysan ku baraarugsaneyn oo...
Jeneral Indha-Cadde oo ka hadlay halis DF Soomaaliya aysan ku baraarugsaneyn oo sababi karta..
Waxaa soo baxaya digniino loo jeedinayo dowladda Soomaaliya, taas oo ku aadan in laga noqdo istiraatiijiyad qaldan oo lagu maamulo ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan militariga.
Qubarada dhanka ciidamada ayaa sheegay in gobalka Shabeellada Hoose ay ku dayacan yihiin kumanaan kamid ah Milateriga Soomaaliya iyo qalab ciidan oo ay heestaan.
Janaraal Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacade, ayaa warbaahinta magaaalada Muqdisho ka sheegay in Al-Shabaab ay ku teedsan yihiin badda iyo wabiga iyo gobollada Banaadir iyo Shabeellada Hoose, islamarkaana ay gudaha ku jiraan ciidamada Soomaaliya.
“Ciidamada Soomaaliya kor waxaa ka jira Al-Shabaab, dhanka Muqdishana waxaa ka jira Al-Shabaab waana nidaam qaldan oo halis ku ah amniga dhalinyarada iyo hantida loo dhiibay” ayuu yiri Janaraal Indhacade.
“Weerarkii Ceel-Saliini, waxaa la waayay cid u gurmata ciidankii la laayay, sababtoo ah maba jirin qof u gurman kara kuwa kale ayaa hada halistaas ku jira” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Janaraal Indhacade.
Dadka yaqaana gobalka Shabeellada Hoose ayaa dowladda Soomaaliya kula taliyay in marka hore ay ku dadaasho in Al-Shabaab laga saaro dhulka deexda ah ee gobalka Shabeellada Hoose, kuwaas oo ah meelaha ay ka soo abaabulaan weerarada Muqdisho iyo Saldhigyada Shabeellada Hoose.
Previous articleXildhibaano Kenyaan ah oo eedeyn loogu jeediyey iney haystaan dhalashada Soomaaliya.
Next articleDEGDEG:Ganacsde Caan ah oo lagu diley Magaalada Cadaado Xiisad ka taagan dilikiisa.
SAWIRO:-Madaxweynaha Puntland oo gaaray Kismaayo Wacdarana ka dhigay.
Madaxda Qaranka oo ka Soo qayb galaaya Isu soo bax duco...